Somaliland oo guul u aragta in magaceeda lagu soo qaaday shirkii Farmaajo iyo Abey – Radio Daljir
Somaliland oo guul u aragta in magaceeda lagu soo qaaday shirkii Farmaajo iyo Abey
Maarso 6, 2019 6:18 b 0
Kulankii madaxwaynaha dowladda faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo raysal wasaaraha Itoobiya Abey Axmed ay shalay ku yeesheen magaalada Addisbaba ayaa lagu soo qaaday magaca Somaliland, kaasi oo lagu sheegay xaqiijinta xiriirka Soomaaliland ee taageerada nabadda ee gobolka.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxaa ay ku sheegtay inay guul tahay madaxwayne Farmaajo inuu garwaaqsaday ahmiyadda Somaliland ee gobolka sida lagu yiri qoraalka.
“Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay soo dhawayneysaa sida Maamulka Farmaajo u garwaaqsadey in ay Somaliland tahay Dawlad Kaalin muhiim u ah kaga jirta Arimaha Gobolka Gaar ahaan dhinacyada Nabad galyada iyo Horumarka Dhaqaalaha ee Gobolka oo aan indhaha laga lalin karin marnaba, isla Markaana uu Aqbalay in aanu Soo Faro Galin Xidhiidhka Soo jireenka ah ee Somaliland iyo Ethiopia”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Madaxwaynaha Somaliland ayaa todobaadkii hore kula kulmay Addisbaba raysal wasaaraha Itoobiya Abey Axmed.
Somaliland ayaa dadaal ugu jirta muddo ka badan 27 sano inay hesho gooni isu taag, inkastoo shacabka gobolada ay sheegato ee Sool , Sanaag iyo Cayn kasoo horjeedaan inay ka go’aan Soomaaliya inteeda kalle.
Maamulka gobolka Sanaag oo digniid udiray Soomaaliland (dhegayso)
Kuuriyada Waqooyi oo dib u kicinaysa xarun gantaalaha laga hago oo ay horay u joojisay